Iazdgarda III - Wikipedia
I Iazdgarda III na Iazdegerda III dia mpanjaka sasanida tany Iràna taloha izay nanjaka tamin'ny taona 632 hatramin'ny 651. Teraka tamin'ny taona 624 tao Istakra (tany Parsa na Farsa) ary maty tamin'ny taona 651 tany Merva (tany Margiana) izy. I Borandokta no nodimbiasany ary i Perôza III no nandimby azy. Izy no mpanjaka sasanida farany nanjaka tao Persia.
Zafikelin'i Kosrô II (Khosro) sy Srina izy, zanaka lahin'ny andriandahy Sariara (Shâhriar) tamin'ny vadintsindranony mainty hoditra izy. Tamin'ny fandringanan'ny Kavada II (Kavadh) ny andriandahy zanaka mpanjaka dia nanavotra azy ny rebibeny tamin'ny nanafenany azy tany amin'ny faritany tany Farsa.
Nampian'i Rostama (Rostam Farrokhzad) tamin'ny nakany ny renivohitra Ktesifôna izy tamin'ny faha-16 taonany. Nanomboka tamin'ny 16 Jona 632 ny fanjakany ary izany no fanombohan'ny tetiandron'ny Parsỳ (Pârsî). Nanapaka nanohitra azy ny zana-drahalahin-drainy atao hoe Hormizda VI ka tsy nofarana izany fifaninanana iznay raha tsy tamin'ny famonoana ity farany tamin'ny Janoary 633.
Nanomboka tamin'ny taona 633/634 dia niatrika ny fananiham-bohitra nataon'ny Arabo miozolmàna, izay efa nanao fanafihana sy fandrobana an'i Arabia persàna nandritra ny fotoana nisian'ny tsy fifanarahan'ny mpandova fitondrana tamin'ny taona 628 hatramin'ny 632, izy. Resy tamin'ny fifanandrenana maro ny mpitari-tafiny, ka isan'izany i Rostama Farokzada (Rostam Farrokhzad) tamin'ny Novambra 636 tao Qâdisiya, izay tsy lavitra an'i Hira, ka nahavotsotra ny renivohitra Ktesifôna izany tamin'ny taona 637, ary tao koa ny faharesena mifanesy tamin'io taona io ihany tamin'ny ady bnifabaiovana tao Ahvaza (Ahvāz), Jalola (Jalula), Ram Hormoza (Rām Hurmuz) ary ny fakan'ny Arabo an'i Kozistàna (Khuzistan). Tamin'ny taona 641-642, faharesen'i Pirozàna (Piruzan) tamin'ny ady bifanaovana tao Nahavanda (Nahavand) ka nahavotsotra an'i Media, ka nahatonga ny mpanjaka Iazdgarda III hialokaloka tany amin'ny tapany atsimon'ireo fanjakany. Resy indroa koa ny tafik'i Iazdgarda III nobaikoin'i Sarvaraza Jadoy (Shahrvaraz Jadhuyih) tao Spahàna (Spahan) tamin'ny taona 642 sy 643 tamin'ny ady notarihin'i Farokzada (Farrukhzad) tao Vaja Roda (Waj Rudh) sy ny fianakavia-mpanjaka armeniana Varaza Tirôtsy II Bagratony (Varaz-Tiroç II Bagratuni), izay niteraka ny fahaverezan'i Ray sy ny fandiosirany mankany Kôrasàna (Khorassan).
Rehefa nanao fifanarahana hampitsahatra fotoana fohy ny ady ny Dabvaihida (dinastian'ny Tabarestàna) dia nialokaloka tany Merva (Merv) ao amin'ny sisintaniny atsinanan'ny empira, tao amin'ny marzban Mahoe izy ka tao izy no novonoin'ny ilay mpitoto vary izy te hangalatra ny firavaka teny aminy tamin'ny fararanon'ny taona 651. Natsipy tany anaty rrenirano ny fatiny nefa hitan'ny tantsaha ka fantatra sady nalevin'i Elia (eveka kristiana nestôriana tao Merva).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Iazdgarda_III&oldid=979171"
Dernière modification le 7 Janoary 2020, à 08:53
Voaova farany tamin'ny 7 Janoary 2020 amin'ny 08:53 ity pejy ity.